Emma Cook sy ny abidia mpamolavola azy: Lalana fototra hatramin'ny A ka Z | Famoronana an-tserasera
Ary raha tsy maintsy asongadinao ireo teny fototra 24 avy amin'ny tontolon'ny asanao… Inona izany? Azoko tsara fa mety ho sahy tokoa ny manontany an'io eo afovoan'ny alatsinainy maraina ka aleoko mamela mpamorona mahay hamaly antsika. Ary io no tafiditra ao amin'ilay tetikasa mahaliana an'ny mpanakanto Emma mahandro miorina any Afrika atsimo ary avy eo dia natolony anay tamin'ny alàlan'ny sary mahafinaritra 24 ny teny 24 tsirairay avy arakaraka ny abidia ary tokony ho eken'ny mpamolavola azy tsirairay avy: ny fiolahana bézier, fakan-tsary DSLR, maody miloko na takelaka misy sary Wacom. Ireo dia teny iraisana be dia be avokoa ka azoko antoka fa ho fantatrao eo noho eo daholo izy ireo. Manomboka eto dia mamporisika anao aho hitsidika ny mombamomba azy ireo ao Behance izay ahitanao ny asany ary hianaranao bebe kokoa momba azy. Tetikasa tsotra misy foto-kevitra tena izy izay miasa tena ary miolakolaka amin'ny fomba fiainana sy ny asan'ny fikambananay rehetra.
Tsy fantatrao ve ireo hevitra naroso? Manararaotra mampatsiahy anao zavatra iray aho izao. Ity lahatsoratra ity dia fotoana mety indrindra hanasana anao hitsidika rakibolana an'ny mpamolavola sary. Ampahatsiahiviko anao fa tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nanolotra an'ity rakibolana niomerika ity izahay ahafahanao mandinika ireo hevi-dehibe indrindra amin'ny asantsika, mamaly fanontaniana ary manitatra ny fahalalanao. Midira avy eto ary sintomy maimaim-poana amin'ny endrika PDF.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Emma Cook sy ny abidia mpamolavola azy: Ny fototra A-Z